प्रदेशको राजधानी र समृद्धिको नेतृत्व दाङबाटै | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / प्रदेशको राजधानी र समृद्धिको नेतृत्व दाङबाटै
Posted by: युगबोध in अन्तर्वार्ता December 4, 2017	0 184 Views
शंकर पो ख्रे ल
ने कपा एमाले का स् थायी कमिटी सदस् य तथा निर्वाचन
क्षे त्र नं. २ प्रदे शसभा २ का उम्मे दवार
मतदानको संघारमा आइपुग्दा चुनावी माहो ल कस् तो छ ?
एक महिनाको चुनावी प्रचारप्रसार अभियान करिव सम्पन्न गरे का छौ ं । आजदे खि मौ न अवधि शुरु हु“दै छ । जनतामा यो चुनावप्रति ठूलो उत्साह छ । वामपन्थी गठबन्धन बने पछि त्यसबाट राजनीतिक स् थायित्व हासिल हुने र दाङको विकास र समृद्धिको आकांक्षाको संबो धन हुन सक्ने विश्वास जनतामा प्रवल पाएको छु । विशे षगरी ने पालमा नौ –नौ महिनामा सरकार परिवर्तन हुने र त्यसले विकासको प्रक्रियालाई अवरुद्ध गनेर् कुराबाट जनता आजित भएका थिए । त्यो चिजको सम्बो धन गर्न बामपन्थी दलहरु सफल भएको जनताले अनुभव गरे का छन् । अहिले कस् तो अवस् था छ भन्दा जनता आफै ले खो जे र उम्मे दवारका कुरा सुन्ने र आप्mना कुरा उम्मे दवारस“ग राख्ने प्रक्रिया अत्यन्त तीब्र बने को छ । हामी आफै ले आयो जना गरे का कार्यक्रमहरु भन्दा ज्यादा मतदाताहरु आफै ले आयो जना गरे का कार्यक्रमहरुमा जानुपनेर् अवस् था छ । यसले जनतामा निर्वाचनप्रति र वामपन्थी गठबन्धनप्रति ठूलो आकर्षण छ भन्ने दे खाउ“छ ।
तपाइ‘ जिल्ला बाहिर पनि जानुभया,े त्यहा“को माहो ल के छ ?
दाङमा मात्रै हो इन, अहिले दे शभरि नै परिवर्तनप्रतिको चाहना अत्यन्त प्रवल बने को छ । खासगरी के पी शर्मा ओ ली प्रधानमन्त्री भएका बखत राष्ट्रिय स् वाधीनता र स् वाभिमानका पक्षमा मुलुकको दीर्घकालीन विकासका सन्दर्भमा जे जस् ता एजे ण्डाहरु नीति कार्यक्रमका माध्यमबाट बजे टका माध्यमबाट अगाडि सार्नुभयो भारत–चीन भ्रमणका माध्यमबाट राष्ट्रहितको पक्षमा जे जति सहमति गनेर् कुरामा सफलता प्राप्त गर्नुभयो त्यो चिजलाई जनताले निरन्तरता दिन चाहे का थिए । सरकार परिवर्तनबाट जनतामा एकखालको असन्तुष्टि प्रकट भएको छ । र, यो चुनावका माध्यमबाट जनता त्यो चिजको खो जीमा छन् । त्यसमाथि माओ वादी के न्द्रस“ग ने कपा एमाले को एकताले जनतामा अझ ज्यादा उत्साह छाएको छ । हामी दाङमा जे पाउ“छौ ं, त्यो प्रवृत्ति दे शव्यापीरुपमै पाइन्छ । पहिलो चरणमा सम्पन्न भएको निर्वाचनको झुकाव पनि वामपन्थी गठवन्धनको पक्षमा रहे को कुरा आइराखे को छ । र, म जहा“ पुगें त्यहा“ जनतामा अभूतपूर्व उत्साह छ । म चुनाव प्रचारकै क्रममा ने पालगञ्ज पुगे ं, प्युठान पुगे ं, कपिलवस् तु पुगें । रुपन्दे हीका साथीहरुस“ग नियमित सम्पर्कमै छु । समग्र पा“च नं. प्रदे शकै अवस् था अनुकूल छ र दे शव्यापीरुपमा पनि वामपन्थी गठबन्धनका पक्षमा अभूतपूर्व लहर छ ।
मौ न अवधिमा मतदातालाई प्रभावित गनेर् चलन ने पालमा छ नि ?
मौ न अवधि लो कतन्त्रका सन्दर्भमा सबै दलहरुका कुरा सुनिसके पछि व्यक्ति स् वयंले विमर्श गनेर् समयका रुपमा लिने गरिन्छ । त्यसकै लागि मौ न अवधि राख्ने गरिएको हो  । तर हामीकहा“ मौ न अवधिलाई जनतालाई अनुचितढंगले प्रभाव पानेर् परम्पराका रुपमा प्रयो ग गनेर् कतिपय राजनीतिक दलहरुबाट हुने गरे को छ । त्यसले गर्दा अहिले सम्म जनतामा जुन प्रकारको मनो विज्ञान बने को छ त्यो मनो विज्ञान मौ न अवधिका बीचमा कायम हुनसक्छ कि सक्दै न भन्ने खालका आशंकाहरु पनि छन् । तर म के ठान्छु भन्दाखे रि पछिल्लो समयमा जनतामा अभूतपूर्वरुपमै सचे तना बढे को छ । जनता हिजो को अवस् थामा छै नन् । दाङ जिल्लाकै हकमा कुरा गनेर् हो भने पटक–पटक ने पाली कांग्रे सले ने तृत्वको अवसर पाउ“दा पनि उसले के ही गर्न सके न भन्ने खालको जबर्जस् त महसुस जनतालाई भएको छ । त्यसमाथि प्रदे शको ने तृत्व गनेर् कुरा र दाङलाई प्रदे शको राजधानीका रुपमा अघि बढाउने कुरा वामपन्थी गठबन्धनको माध्यमबाट मात्रै सम्भव छ भन्ने कुरा खासगरी म आफै ले प्रदे शको ने तृत्व गनेर् अवसर वामपन्थी गठबन्धनका तर्फबाट प्राप्त गरे को कुरालाई दाङका अवसरका रुपमा लिने जबर्जस् त जनमत छ । त्यो जनमत मौ न अवधिका बीचमा गरिने अनुचित क्रियाकलापबाट चाहि प्रभावित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दै न । जनता स् वयंले त्यस् ता क्रियाकलापको रखवारी गर्नुहुन्छ भन्ने म ठान्छु ।
अभावमा रहे का जनतालाई पै सा र प्रलो भनले आकर्षित गरे का उदाहरण छन् नि ?
जनताको गरिवीमाथि, अज्ञानता र अशिक्षामाथि लामो समयसम्म चलखे ल भएकै हो  । नत्र राम्रो काम गनेर् हरु स् थापित हुन नसक्ने र भ्रम सिर्जना गनेर् हरु स् थापित हुने काम हु“दै नथ्यो  । तर पछिल्लो समयमा जनतामा जुन प्रकारको जागरण आएको छ, त्यो जागरण चाहि‘“ वास् तवमा भन्ने हो भने सम्मान गर्न लायक छ भन्ने म ठान्छु । जनताले आफ्नो भविष्यलाई के न्द्रबिन्दुमा राखे र मतदान गर्नुहुन्छ भन्ने मा म विश्वस् त छु । दाङमा त नारा नै लाग्ने ग¥या छ । फटाहाहरुको खाइदिने हो , भो ट चाहि“ जनताको पक्षधर शक्तिलाई दिने हो भन्ने नारा जनताकै बीचमा लाग्ने गरे को छ ।
प्रदे शको ने तृत्व पाउने आधार के छ ?
ने तृत्वको सन्दर्भमा वास् तवमा माओ वादी के न्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड स् वयं आफै ले पा“च नं. प्रदे शको ने तृत्व तपाइ“ले गर्नुस् भने र आग्रह गर्नुभएको हो  । हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले प्रचण्डको प्रस् तावमा समर्थन गर्नुभएको अवस् था हो  । त्यसअर्थमा मै ले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको तयारी गर्दागदैर् प्रदे शसभाको ने तृत्वलाई स् वीकार गरे को हु“ । मे रो सो च के रह्यो त भन्दाखे री प्रदे शको ने तृत्व प्राप्त गर्दाखे री दाङलाई प्रदे शको राजधानी बनाउने दंगाली जनताको आकांक्षालाई पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने अर्थमा मै ले यसलाई स् वीकार गरे को हु“ । मै ले चुनाव जित्दाखे री प्रदे शको ने तृत्व हासिल गनेर् कुरामा कुनै सन्दे ह छै न । सुनिश्चित जस् तै छ । किनभने पा“च नं. प्रदे शमा वामपन्थीहरुको बहुमत आउने कुरा शंकाको विषय हो इन । हामी बहुमत मात्रै हो इन दुई तिहाइको नजिक छांै  । त्यसअर्थमा पा“च नं. प्रदे शमा हामीले ने तृत्व हासिल गछौर् ं र त्यो ने तृत्व हासिल भएको अवस् थामा ने तृत्व मै ले नै गनेर् कुरा तय भइसके को अवस् था छ । जहा“सम्म दाङलाई प्रदे शको राजधानी बनाउने सन्दर्भ छ अन्य जिल्लाले पनि आकांक्षा व्यक्त गर्नु स् वाभाविकै हो  । तर राजधानी बनाउने कुराका मापदण्डहरु हुन्छन् । राजधानी भइसके पछि त्यसको सुरक्षा संवे दनशीलताको पक्ष हो  । सुरक्षा संवे दनशीलता, भौ तिक पूर्वाधार निर्माण, उपयुक्त जलवायु र मौ समका कारण दाङ राजधानी बन्ने पक्का जस् तै छ ।
पार्टी एकता गनेर् कुराको सन्दे श जनतामा पुगे को छ ?
वाम गठवन्धन र पार्टी एकताको पहल ने तृत्वले नै गरे को हो  । यो सन्दे शले ने ताहरु जति उत्साहित र आशावादी हुनुहुन्छ त्यो भन्दा ज्यादा उत्साहित र आशावादी मै ले कार्यकर्ताहरु पाए“ । कार्यकर्ताले अति छिटो यसलाई ग्रहण गर्नुभयो  । हामीले दाङ जिल्लामा कार्यकर्ता भे ला आयो जना ग¥यौ ं । त्यहा“ पनि अत्यन्त उत्साहका साथ हाम्रो अभियानलाई उहा“हरुले साथ दिनुभयो र तुरुन्तै काममा जुट्नुभयो  । जब हामी जनताको बीचमा जान थाल्यांै । जनतामा झन त्यो भन्दा ज्यादा उत्साह रहे छ । त्यै भएर मै ले भन्ने गर्छु ने ता भन्दा कार्यकर्ता उत्साहित, कार्यकर्ता भन्दा जनता उत्साहित छन् वामपन्थी एकताप्रति । अझ जनस् तरमा के पाइन्छ भने यो चुनावसम्म मात्रै नहो स् है  । पार्टी पनि एकता गर्नुपर्छ भने र उहा“हरुले जो ड दिइराख्नु भएको छ । त्यस परिप्रे क्षमा म के ठान्छु भन्दा मतदातास् तरमा त्यो कुनै समस् यै छै न । अत्यन्त हार्दिकताका ढंगले उहा“हरुले स् वीकार गर्नुभएको छ । अलिकति चलखे ल गर्ने को सिस चै ं भइरहे को छ । खासगरी प्रतिपक्षी दलहरुका तर्फबाट भ्रम सिर्जना गर्ने , अन्यो लता खडा गर्ने , त्यसका माध्यमबाट के ही फाइदा लिन सकिहालिन्छ कि भन्ने तिर लागे का छन्, तर कुनै पनि समस् या हुने छै न । म एउटा सन्दर्भ बताउ“, रो ल्पामा हाम्रो प्रत्यक्षतर्फ कुनै उम्मे दवार थिएनन् । तर त्यो परिचालनको ने तृत्व ने कपा एमाले का ने ता गो कुल घर्तीले गर्नुभो  । रुकुममा हाम्रा कुनै उम्मे दवार थिएनन् । अत्यन्त उत्साह, सक्रियताका साथ हाम्रा ने ता साथीहरुले त्यहा“ निर्वाचन परिचालनको कमाण्ड गर्नुभो  । यतिसम्म कि माओ वादी अध्यक्ष प्रचण्ड उठे को क्षे त्रको कमाण्ड विगतमा निकै चर्चित भनिएको भरतपुरको घटनास“ग जो डिएको दे वी ज्ञवाली आफै त्यो चुनाव प्रचारको कमाण्ड गरिराख्नुभएको छ । भन्दाखे रि त्यो पुरानो घटनाहरुलाई अगाडि सारे र विभाजन ल्याउन सकिन्छ कि, भ्रम सिर्जना गर्न सकिन्छ कि भन्ने खालको जुन को सिस छ त्यो निरर्थकको को सिस हो  ।
एकले अकोर् पार्टीलाई भो ट हाल्दै न भन्ने खालको कुरा छ कि ?
त्यो चै पूर्णतः गलत कुरा हो  । एमाले ने ताहरुको माओ वादीका कार्यकर्तास“ग र माओ वादीका ने ताहरुको एमाले का कार्यकर्तास“ग जुन प्रकारको हार्दिकतापूर्ण सम्बन्ध दे खिन्छ, यस् तै कार्यकर्ता कार्यकर्ताबीचको सम्बन्ध पनि अत्यन्त हार्दिकतापूर्ण छ । त्यसको अत्यन्त सकारात्मक प्रभाव जनतामा परे को छ । जनता त राजनीतिक दलहरु मिले को दे ख्न चाहन्छन् । त्यो चिज यसपटक निर्वाचनका क्रममा प्रकट भएको छ र जनता त बडा उत्साहित पनि भएका छन् ।
तपाइ“लाई जिताएर दाङले के पाउ“छ ?
मलाई एउटा राम्रो मौ का मिले को छ । एकातिर दाङको सदरमुकाम रहे को घो राही पनि मे रो क्षे त्रभित्र पर्छ र दाङको सबभन्दा विकट क्षे त्रका रुपमा रहे को बंगलाचुली गाउ“पालिका पनि मे रो निर्वाचन क्षे त्रभित्र पर्छ । बंगलाचुली गाउ“पालिकाको भ्रमण गर्ने क्रममा मै ले के पाए“ भन्दा कतिपय ठाउ“हरुमा त विकास छिरे कै रहे नछ । वास् तवमा भन्ने हो भने परम्परागत ढर्राबाट अगाडि बढ्ने हो भने पहाडी भूभागहरुमा विकासको अनुभूति जनताको बीचमा पु¥याउन सकिदै न । म प्रदे शको ने तृत्व गर्ने ठाउ“मा पुगें भने पहाडी भूभागको एकीकृत विकासको यो जना म अगाडि सार्ने छु । जस् तै बंगलाचुली, सै घा, स् युजा, लो हारपानीजस् ता पहाडी भूभागहरु छन् ती भूभागहरुको विकासको मो डे ल र मै दानी भागको विकासको मो डे ल फरक हुन्छ । म त्यसलाई यो जनाबद्धरुपमा अगाडि बढाउने सो चमा पुगे को छु । जसबाट पहाडी क्षे त्रका जनता विगतको पीडाजनक विरासतबाट मुक्त हुनुहुने छ ।
अन्तिममा, मतदाताहरुलाई के ही भन्नुहुन्छ ?
विशे षगरी दाङमा दुई खालको कुराबाट दाङको जनमत प्रभावित हुने ग¥यो  । एउटा जातीयताका नाममा । अकोर् चै मे रो परिवार त जन्मदे खि नै फलानो राजनीतिक आस् थाको परिवार हो भन्ने अर्थमा चै आफ्नो स् वतन्त्र विवे कको प्रयो ग नगर्ने खालको प्रवृत्तिबाट दाङ आक्रान्त भयो  । जसले ने तृत्व विकासमा ठूलो चुनौ ती खडा ग¥यो  । पछिल्लो समयमा दङाली जनतामा जबर्जस् त राजनीतिक जागरण आएको छ । दाङको भविष्यस“ग जो डे र हे र्ने नया“ मान्यताको विकास भएको छ । जसले दाङलाई प्रदे शको राजधानी बनाउनसक्छ । जसले ने तृत्वमा पुगे र प्रभावकारी भूमिका खे ल्नसक्छ । राष्ट्रलाई र सिङ्गो समाजलाई यो गदान दिन सक्छ त्यस् ता मान्छे हरुलाई जिताएर पठाउने कुरा नै उपयुक्त रहे छ भन्ने खालको रियलाइजे शनको प्रक्रिया शुरु भएको छ । यसपटक म जहा“ गएको छु वामपन्थी मतदाताहरु मात्रै हो इन, गै रवामपन्थी मतदाताहरु जो प्रजातन्त्रप्रति आस् था विश्वास राखे र हि“ड्नुभएका मतदाताहरु पनि अत्यन्त सकारात्मक रुपमा मे रो उम्मे दवारीलाई बुझ्नुभएको छ । म सबै को साझा व्यक्तिका रुपमा दाङको समृद्धिको ने तृत्व गर्न चाहन्छु ।
त्यसका लागि म सबै दङाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुलाई चिन्हमा मतदान गर्न आग्रह गर्दछु । र मलाई काम गर्ने अनुकूल वातावरणका लागि प्रतिनिधिसभाका तीनवटै निर्वाचन क्षे त्रमा बामपन्थी उम्मे दवारलाई जिताउन र प्रदे शसभाका छ वटै निर्वाचन क्षे त्रका वामपन्थी उम्मे दवारहरुलाई जिताउनका लागि म हार्दिक अनुरो ध गर्न चाहन्छु ।
Previous: दाङ प्रदेश राजधानी साझा एजेण्डा
Next: अब दाङको समृद्धिको नेतृत्व गर्छु